Ntak-akpọsa? - RayHaber
HomeRayHaber - newsgbọ okporo ígwè na ọsọNtak-akpọsa?
Gịnị kpatara RayHaber ji guzobe?
Turkey n'afọ 2023, iwebata elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè n'ime obodo 29, 25 puku kilomita iji ruo ngụkọta ogologo nke akara na ọ na-zubere na-etinye ego ma ọhụrụ ụgbọ okporo ígwè edoghi na 250 ijeri dollar. Na 2035 ọnụ ọgụgụ a ga-eru 31 puku kilomita. Tụkwasị na nke ahụ, iji ụgbọ okporo ígwè na njikọ mba na mpaghara ebe a na-arụ ọrụ ga-aba ụba.
ọzọ abụrụ obodo n'akụkụ isi obodo na obodo nta na-zubere na ụzọ ụgbọ oloko, ìhè okporo ígwè, tram, monorail na eriri njem progeria na Herzegovina n'oge ugbu a investments My elekọta, na-atụ anya iru ego nke ego dollars 500 ijeri!
Iji duzie nghọta nke ndi oru nta akuko na mpaghara uzo di ngwa ÖzenRay Media dị ka, RayOZIAnyị eguzobewo. özenray Railway Ltd Sti ụlọ ọrụ jisiri site rayhaber ka raillynews, teleferikhab na karayoluhaber Anyị gụnyere anyị website!
Ị nwere ike ịchọta ozi gbasara ụgbọ okporo ígwè dị ugbu a, okporo ụzọ na ụzọ ụgbọ okporo ígwè m www.rayhaber.co2011, akwụkwọ nyocha ahụ, 01.01.2012'de malitere akwụkwọ edemede. Ị nwere ike ịgbaso ozi usoro okporo ígwè niile na ntanetị mba na nke ụwa. Anyị na-eji ozi pụrụ iche, map, vidiyo na isiokwu bara uru na ogidi. Ị nwere ike ịchọta ọkwa ozi nke mpaghara na mpaghara mpaghara na website anyị! Ụlọ ọrụ mgbasa ozi 60 anyị kwa afọ, nke dị nso na 25 puku, dị nnọọ mma karịa ebe ndị ọzọ na-ede akụkọ na 3 zigara ihe karịrị otu puku ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-ebipụta akwụkwọ ozi ọma kwa ụbọchị. Ọzọkwa, ọtụtụ ndị na-eso 10 puku ndị debanyere aha na anyị na saịtị na RSS, e nwere òtù na weebụsaịtị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite ụlọ ọrụ gị n'ụzọ dị irè karị, biko kpọtụrụ anyị na anyị ga-atụle nhọrọ nhọrọ mgbasa ozi kwesịrị ekwesị.
Ihe dị iche iche anyị nwere
Ozi ntanetị 65
iCalendar kwadoro kalịnda / omume na-akwado
Nsonaazụ ahịa ugbu a
Ogologo oge 22 ugbu a kwa ụbọchị
Ulo site oru na ebe
Nkọwa akụkọ ozi 25 kwa afọ
Oge 11: Nkọwapụta nke ozi ọhụrụ ruo na 00 na akwụkwọ ntanetị
Taa na akụkọ ihe mere eme
Ọganihu ọhụrụ na nkà na ụzụ
anyị News 100 A na-ebipụta ya n'asụsụ dịgasị iche iche, ndị mmadụ na ụlọ ọrụ ndị na-agbaso akụkọ mpaghara na asụsụ ha.
Akwadoro site na ịme ihe na netwọk mmekọrịta RAYHAB bụSite na nhọta gị na-aba ụba, na-amụba ohere gị nke ịbụ ndị a ghọtara na ndị na-ege gị ntị.
Instagram: rayhab bụ 3K
Feedburner: rayhab bụ 10K
Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa
Daily 60.000 ndị nleta pụrụ iche
3.000 na-edebanye aha email
Profaili onye nleta
% 20 European Mba
% 10 Mba ndị ọzọ
% 75 Nwoke
% Ụmụ nwanyị 25
Ndị na-ege ntị bụkarị ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè
Ndị na-ege ntị na mba ndị ọzọ na-agụ site na mba ọzọ na-agbaso saịtị anyị mgbe niile.
Na 190.000 n'ozuzu ogo nke ụwa mbụ site, dị na Turkey, ndị mbụ 2.000 bụ rayhab saịtị na-ebili. Ihe mgbaru ọsọ anyị 100.000 mbụ na ụwa na-na-na mbụ 1.000 saịtị na Turkey.
Oge A na - enweta Oge A (2019)
678 × 60 pikselụ Mgbasa Ozi Mgbasaozi Anya
NDỤMỌDỤ Size (pikselụ) ebe Eegwọ (12 kwa ọnwa)
1.1 678 × 60 Right nke logo (Omenala) 4.000
1.2 678 × 60 Kwuo elu 2.500
1.3 678 × 60 Kwuo 2.000
325 × 60 pikselụ Mgbasa Ozi Mgbasaozi Anya
NDỤMỌDỤ Size (pikselụ) Nkọwa ebe Eegwọ (12 kwa ọnwa)
2.1 325 × 60 Okpokoro ekpe £ 1.000
Akwụkwọ edemede / Mgbasa Ozi
NDỤMỌDỤ Size (pixel) ebe Ahịa (PC)
3.1 Ederede na anya Kwa ozi 100,00
PR na Press Release
Ị nwere ike izipu gị pịa a na anyị editor@rayhaber.co iletisim@rayhaber.co address.
A: m www.rayhaber.co
Ọnụ Ọgụgụ Ngwongwo Mmanụ Ọnụ 'Mgbasa Mgbasa Ozi Ike 03 / 04 / 2014 Total quartz Motor mmanụ 'si Strong Attack Ad: ụwa 5. Total bụ kasị ike ụlọ ọrụ, mines banyere mmanụ na-mma site na ọtụtụ ụgbọala na-emepụta nke ụwa na-eduga Total quartz engine ike ekesịpde site mmanụ, pụtara TV na arụmọrụ ma quality data 04 ga-ikuku na April 2014, ọ na-akwadebe izute na-eji ọkụ site na redio na digital mgbasa ozi. Total lubricants mba gburugburu ụwa na ihe karịrị 150, akpakanamde, ulo oru mbo, usoro ime njem, ọrụ ubi, na-ewu na-arụ ọrụ na Maritime oru. 2 nde ise ngwaahịa kwa afọ izute na-eji ọkụ Total lubricants, dakọtara na teknụzụ ndị na-echebe gburugburu ebe obibi, na ume na ...
Nkwupụta Obi Ụtọ: Bipụta ọrụ dị ka ihe gbasara mgbasa ozi mgbasa ozi 14 / 03 / 2014 TCDD General Directorate nke suppression mpempe akwụkwọ dị ka na ot ebipụta mgbasa ozi ihe azụmahịa obi IHE Bidding NA isiokwu GBASA edemede 1- Ozi on eme kwadoro 1.1. The Mgbakọnata kwadoro; a) aha: TCDD General Directorate b) okwu: Talatpaşa Avenue 06330 Train Station / Çankaya / ANKARA c) Ekwentị nọmba: 0312 309 05 15 / 4319-4573 d) Fax nọmba: 0312 311 13 06 e) E-mail address: alimkem bụ @ tcdd.gov.t f) mkpa mkpara aha na aha nna / aha: Alaka Manager Scholars ájị 1.2. Ndị na-anụ ụta nwere ike ịnweta ozi gbasara obi ebere site na ịkpọtụrụ ndị ọrụ ahụ na adreesị na ọnụ ọgụgụ ndị dị n'elu
Nkwupụta Obi Ọjọọ: Ntọala na nkwụsị nke mgbasa ozi mgbasa ozi n'elu ebe a na-adọgharị ụgbọ ala (YHT, EMU, warara igwe na DMU set) 14 / 03 / 2014 TCDD General Directorate n'ụgbọala elu elu nke foil mgbasa ozi eyiri nke nzukọ a na disassembly ọrụ obi IHE Bidding NA isiokwu GBASA edemede 1- Ozi on eme kwadoro 1.1. Onye nwe ụlọ ọrụ azụmahịa; a) aha: TCDD General Directorate b) okwu: Talatpaşa Avenue 06330 Train Station / Çankaya / ANKARA c) Ekwentị nọmba: 0312 309 05 15 / 4319-4573 d) Fax nọmba: 0312 311 13 06 e) E-mail address: alimkem bụ @ tcdd.gov.t f) mkpa mkpara aha na aha nna / aha: Alaka Manager Scholars ájị 1.2. Ndị na-azụ ahịa ga-akpọtụrụ ndị ọrụ nke adreesị na ọnụ ọgụgụ ndị dị n'elu site na ịkpọtụrụ ndị ọrụ maka ọrụ ebere.
Nkwupụta Obi Ọjọọ: Ịpịpụta ọkọlọtọ mgbasa ozi na ịtụkwasị obi 14 / 03 / 2014 TCDD General Directorate nke ada na ebe kpọgidere akwụkwọ ịma ọkwa na-akpọsa ọrụ obi IHE Bidding NA isiokwu GBASA edemede 1- Ozi on eme kwadoro 1.1. The Mgbakọnata kwadoro; a) aha: TCDD General Directorate b) okwu: Talatpaşa Avenue 06330 Train Station / Çankaya / ANKARA c) Ekwentị nọmba: 0312 309 05 15 / 4319-4573 d) Fax nọmba: 0312 311 13 06 e) E-mail address: alimkem bụ @ tcdd.gov.t f) mkpa mkpara aha na aha nna / aha: Alaka Manager Scholars ájị 1.2. Bidders nwere ike nweta ozi banyere obi site n'ịkpọtụrụ ndị na-arụ ọrụ na-elekọta na n'elu address na nọmba. Nkeji edemede ...
3 na Sanliurfa, Istanbul. Banner nke Bridge Bridge (Video) 18 / 03 / 2014 3 na Sanliurfa, Istanbul. The àkwà ya mbụ Ad Poster: Prime Minister Recep Tayyip Erdogan kwuru n'oge a rally haziri 9 Istanbul xnumx'ünc na Şanlıurfa na March nyere ozi ọma na elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè akwa. Prime Minister Recep Tayyip Erdogan kwuru n'oge a rally haziri 3 Istanbul xnumx'ünc na Şanlıurfa na March nyere ozi ọma na elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè akwa. Ịgbaso Prime Minister kwuru na nso nso ke Nzukọ maka AK Party City na-emi odude na obi nke mgbidi nke 9 Bamyasu storey ụlọ ibu ọkọlọtọ ndị kpọgidere. Prime Minista Erdoğan wee chọta na '3. Anyị na-eme ọkọlọtọ e dere edere, dọtara mmasị ụmụ amaala. Yapıl Ọ bụghị ihe bara uru na e mere ka ngosi 5 dị na Istanbul dị na Şanlıurfa.
Mgbasa ozi Metrobus 30 / 12 / 2015 Metrobus mgbasa ozi IETT na Metrobus akara-agba ọsọ n'etiti ụgbọ mgbasa ozi elu elu nke mmepụta na-eji dị mgbasa ozi ohere. Official Gazette taa, "dị ka mgbasa ozi nke ebe elu elu nke Metrobus akara-agba ọsọ n'etiti ụgbọ ala na ịgbaziri mgbasa ozi ego ọhụrụ mgbasa ozi n'ihu ubi nke n'ichepụta na-eme nwụnye na ịgbaziri nke nri iji mgbasa ozi ohere ga-goro obi" Dị ka mgbasa ozi-eduga aha 250 ụgbọ ala na elu elu Ogwe mgbasa ozi na 5 na-ekwu na otu puku ihu ihu ọhụrụ. The atụmatụ na-eri nke obi bụ 1 933 puku pound plus KDV nde. Jiri Obi Ụtọ Mee
Mgbasa ozi ahia nke atọ nke atọ bipụtara (Video) 25 / 08 / 2016 A na-ebipụta akwụkwọ nke atọ nke ọhụụ nke atọ: 3. a tọhapụrụ ala mmiri. 3 gbasara afọ 100 dị njikere na okwu nke mgbasa ozi ọhụrụ enyewo okwu ahụ. Nke a bụ nkọwa nke mgbasa ozi ahụ. otu n'ime Turkey kasị mkpa prroje dechara. Ụbọchị mmalite na ọkwa ọkwa ọhụrụ ahụ yiri ka a na-ekwukarị banyere ya. Mgbe mbipụta ahụ bụ mba, ogwe aka 4 bụ okwu okwu mgbasa ozi. Ala elu nke elu ala nke atọ Ala akwa nke atọ bụ ọdọ mmiri kachasị elu nke ụwa tụnyere oké osimiri.
A na-ere ahịa ndị na-akpọ Metrobus dị ka oghere mgbasa ozi. 17 / 02 / 2012 Kwa ụbọchị, Metrobus na tunnels turnstiles na-eji ọtụtụ narị puku na-ere dị ka mgbasa ozi na ohere ke Istanbul Eletrik Tramway na Ọwara (IETT) General Directorate of Operations, na ebe ke Metrobus akara na ọwara amama mpụga ebupụta na ọnụ ụzọ, n'ihi na 36 ọnwa ka enyefetu maka iji dị ka mgbasa ozi na ohere. Official dị ka obi mara ọkwa bipụtara taa nke nke akwụkwọ akụkọ, IETT emeghe obi iji ego dị na ojii na ọwara n'ọnụ ụzọ na Metrobus akara nke General Directorate 249 na elu elu nke turnstiles maka ojiji 36 ọnwa dị ka mgbasa ozi na ohere. Akwụkwọ ozi ka obi na-enye ruo mgbe February 28 2012 IETT General ...
YHT Mgbasa ozi 06 / 08 / 2018 YHT Advertisement Na-egosi Mmasị Dị Ukwuu: Site na TCDD, na-egosi ihe nkiri azụmahịa na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ nke na-ewe iwe nchịkwa mgbasa ozi, nke dị jụụ ma na-agwụ ike. Mgbasa ozi n'oge na-adịghị anya dọtara mmasị dị ukwuu. Nke a bụ video promotional: 2019 ahịa ugwo ụgbọ oloko dị elu emelitela. Na ngwa ngwa ụzọ ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ okporo ígwè na Turkey bụ Istanbul-Eskisehir - njem nnọọ ọsọ ọsọ na Ankara na Konya ụzọ. Ụgbọ okporo ígwè dị elu na-agafe n'etiti ebe 200 na 320 km. Site na Ankara ruo Istanbul, 4.5 nwere ike iru n'ihe dị ka awa. Na ngwa ngwa ụgbọ oloko ndị dị ezigbo ala ...
Istanbul New Airport Advertisement Shook Social Media 24 / 10 / 2018 A izu tupu mmeghe, HDI, Istanbul na New Airport "Victory Ncheta" themed ad film natara na agbasa ozi n'ikuku. All ụwa a na-eche ịnụ ọkụ n'obi na nọrọ na Istanbul na-erughị a izu mmeghe nke ọhụrụ ọdụ. Airport ngo iGain n'ịmalite ọrụ na-ewu azụmahịa na 25 afọ nke, 29 October Republican ad kwadebere maka ebube oghere kwekọrọ ekwekọ na Oriri nke film ụnyaahụ mgbede dị ka ihe niile na mba TV ọwa na digital - malitere bipụtara na-elekọta mmadụ media ọwa. 29 ı
Murat ọ sịrị:
sir m nwere ígwè Passer saịtị gị mgbe niile ga-eso dị mma nke ukwuu ma na ị na-efu efu gị var.siz saịtị oké tụkwasịrị obi na-ekwe nkwa a saịtị na mgbe a doro anya, anaghị m sizdeğerl si mee ka a arịrịọ isi mara na-enweghị ọrụ na Turkey nwere na-arụrụ ọrụ sịrị na a na saịtị ma ọ bụrụ na ị na-enye onyinye iji gbochie nke a na-enweghị ọrụ mma na-olmazmı ọrụ nwere ọrụ na-arụrụ ọrụ nri mgbe m were na-akpọ işci azụmahịa Verne ke a saịtị dị ka nke a na ị tinye a forum ebe ọrụ na-achọ ọrụ m melite mkpa bıranj azụmahịa n'okporo ụzọ dee ọrụ m na m ihe atụ nke onwe m, elektiro na reyiltek thermite ite esenyịn, ese na m bıranj ma m ike ịhụ a ọrụ arịrịọ si a ụdị ihe ọmụma bara uru maka Umeda site otu ọfịsa m ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị na-enye gị ntule nke okwu a, m ugbu a na-enye gị ozi
Murat Bey, ọ dị mwute ikwu na anyị apụghị ime ya n'ụzọ iwu
Ọnụ Ọgụgụ Ngwongwo Mmanụ Ọnụ 'Mgbasa Mgbasa Ozi Ike
Nkwupụta Obi Ụtọ: Bipụta ọrụ dị ka ihe gbasara mgbasa ozi mgbasa ozi
Nkwupụta Obi Ọjọọ: Ntọala na nkwụsị nke mgbasa ozi mgbasa ozi n'elu ebe a na-adọgharị ụgbọ ala (YHT, EMU, warara igwe na DMU set)
Nkwupụta Obi Ọjọọ: Ịpịpụta ọkọlọtọ mgbasa ozi na ịtụkwasị obi
3 na Sanliurfa, Istanbul. Banner nke Bridge Bridge (Video)
Mgbasa ozi Metrobus
Mgbasa ozi ahia nke atọ nke atọ bipụtara (Video)
A na-ere ahịa ndị na-akpọ Metrobus dị ka oghere mgbasa ozi.
YHT Mgbasa ozi